Ọtụtụ Virgin Mary na Ezinụlọ dị nsọ nke Dzhublyk - WRSP
ONYE BỤ EZI NA-AGBANYE NDỊ NA-AGBANYE NA NNA EZINỤLỌ
2002 (August 27): Mbido mbụ nke Virgin Mary na Dzhublyk ruru Olenka Kuruc na Marianka Kobal.
2002 (August 30): Onye liturgy mbụ na saịtị ahụ bụ onye bishọp bụ Ivan Marhitych duziri.
2002 (Septemba 18): Ndị ọhụụ ahụ hụrụ ka ha hụrụ Jizọs nọ n'oge Akwụkwọ Nsọ.
2002 (September 21): Ndị ọhụụ ahụ hụrụ Saint Joseph.
2002 (October 29): Akwụkwọ ozi sitere n'aka onye isi nke Muchevo Greek Catholic Eparchy, Bishop Ivan Semedii gbochiri ndị ụkọchukwu ịhazi nzukọ na njem uka na Dzhublyk.
2002 (Disemba 1): Ndị ọhụụ ahụ na ndị mụrụ ha na ndị na-akwado ha sonyere na nzukọ John Paull II na Vatican.
2003 (Jenụwarị 22): A gọziri ụlọ ụka mbụ na Dzhublyk.
2003 (Eprel 4): A gọziri Stations nke Cross na Dzhublyk.
2003 (May 27): Esemokwu dị n'etiti ndị na-akwado Dzhublyk na ndị ọchịchị nke Muchevo Greek Catholic Eparchy mere.
2003 (July 12): A gọziri obe maka ịdị n'otu nke Ndị Kraịst niile.
2004 (July 7): Emere obodo ndị mọnk episcopal maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na Dzhublyk nwa oge.
2005 (Disemba 17): Thelọ Nzukọ Ezinụlọ Dị Nsọ mepere.
2007 (June 15): Thelọ Nsọ Obi Dị Nsọ nke Jizọs meghere.
2008 (July 10): A mara ọkwa ọkwa banyere nhazi nke iwu ndị mọnk na Dzhublyk.
2008 (August): Thelọ nke Ezinụlọ Ezinụlọ malitere.
2009 (October 14): E gosipụtara akụkọ ebube nke ebere nke ebere nke Jizọs.
2010 (Jenụwarị 9): Episcope Milan Šašik gọziri ụlọ maka ndị njem ala nsọ, sinima na ụlọ nzukọ ndị e wuru na Dzhublyk.
2012 (May 13): obe si na ebe iri na otu nke Cross na Dzhublyk malitere ọbara ọgbụgba.
2013 (Disemba): Nna Atanazii Tshiipesh were ọrụ ebube Chineke nke ebere Jesus na Kyiv iji gọzie ndị ngagharị iwe na Maidan.
2014 (November 21): Ihe ncheta nke Egwuregwu Eluigwe (Nebesna Sotnia) e guzobere na Dzhublyk.
2018 (August 8): Ejiri saịtị Microsoft nke Dzhublyk.
2016 (September 26): Ngọzi nke Ụlọ Nzukọ nke Onyenwe anyị
2017 (December 15): Akara nke Kraịst Onye Nzọpụta nke Ụwa guzobere na Dzhublyk.
2018 (February 11): Ngọzi nke ebe obibi maka ebe obibi nke Saint Nicolaus n'ọdịnihu.
Ebe a na-ahụ anya na Dzhubyk dị n'ókèala nke ụka nke Chọọchị Katọlik nke Muchevo na Transcarpatian Ukraine. Dị ka ndị bi na Vil'khivka na Nyzhne Bolotne si kwuo, obodo abụọ ndị Transcarpathian dị nso na saịtị ahụ, ruo na August 2002 Dzhublyk bụ isi mmiri nke dị na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ka ọ dị ntakịrị obere ogige dị n'akụkụ ọnụ ọhịa, ebe ndị obodo ga-aga dị ọcha, na-enye ume ọhụrụ mmiri. Ihe niile gbanwere mgbe August 27, 2002 gasịrị, mgbe ụmụ nwanyị abụọ si Nizhne Bolotne, Marianka Kobal na Olenka Kuruc, gara ị nweta mmiri site na mmiri ahụ wee hụ nwanyị mara mma, ka ọ na-eguzo n'igwe ojii ahụ nke okooko osisi kpuchiri. [Foto dị n'aka nri] Mgbe e mesịrị n'otu ụbọchị ahụ, ọ mere ka ha mata ya dị ka Meri Nke Dị Ọcha Dị Ọcha.
Kemgbe ụbọchị mbụ, Dzhublyk enwewo ike dị ukwuu nke ndị na-akwado ya. Otu ụzọ si agbata obodo Nizhne Bolotne, bụ ebe ọ bụghị naanị ndị mụrụ abụọ ahụ ka a mụrụ kamakwa onye mọnk Basilian n'oge ahụ, Atanazii Tsiipesh, na onye Gris Katọlik Katọlik na nna nke Marianka Kobal, Petro Kobal, na-ahazi ndụ na npụta site na ụbọchị mbụ. Otú ọ dị, mgbe ọnwa ole na ole gbalịsịrị ike, nkwenye ndị isi okenye abụọ ahụ mere ka nna Petro wepụ ya na saịtị ahụ. Marianka kwụsịkwara ịga na saịtị ahụ ruo afọ ole na ole. Ugbu a, ọ na-aga na saịtị ndị ọzọ na Nizhne Bolotne, ọ bụ ezie na nna ya kwuru na ya ka na-agwa Virgin Mary okwu. Kemgbe ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị onye na-elekọta njikwa ahụ bụ nna Atanazii, onye, ​​dị ka ọ na-ekwu n'onwe ya, na-achọ ndụmọdụ nke Virgin Mary site na Olenka na ihe niile o mere. Olenka na - abịakwute Olenka mgbe ụfọdụ site na ndị njem ala ọzọ nke na - achọ ndụmọdụ ya ma jụọ Virgin Mary ajụjụ site n'aka ya. Otú ọ dị, ọ na-adịkarị na-ekwu okwu n'ihu ọha, yana nkwurịta okwu ya na Virgin Mary na ọhụụ nke ndị ọzọ dị nsọ na-eduzi ọha na eze na-echekwa site nna Atanazii.
Ndị na-akwado obodo na-ahazi Òtù Ụmụnna Ezinụlọ, òtù na-abụghị ndị gọọmenti na-akwado saịtị ahụ site na ịnakọta onyinye; inye ndị pilgrim nri; enyere aka na nhazi nke saịtị; na ịkwa ụda, ma na-akwado Nna Atanazii na mmekọrịta ya na akụkụ ahụ, ụlọikpe, na Onye Katọlik Katọlik Katọlik nke Mukachevo. Ha na-enye aka n'ichebe ihe owuwu ụlọ, ijikwa ọrụ iwu na saịtị, na ịhazi njem. N'ime afọ ndị mbụ, isi nke nzukọ ahụ bụ onye nkịtị nke Nizhne Bolotne, ma na 2011 Nna Atanazii n'onwe ya ghọrọ onyeisi ọrụ nke nzukọ ahụ.
Nke nta nke nta, otu nzukọ ọzọ dị mkpa na Dzhukek, ọ bụghị na-emegide onye nke mbụ kamakwa dị ka mgbatị ya. Otu nzukọ ndị na-eto eto, Ụmụ nke Ezinụlọ Dị Nsọ, toro site na otu ụmụaka nke malitere ịbukọta na Dzhublyk nanị mgbe mbụ ha pụtara. Ụmụ ahụ bụ ndị ọgbọ nke ndị ọhụụ, ọtụtụ ndị nne na nna ha so n'Òtù Ụmụnna Ezinụlọ. Ha chetara izu mbụ na ọnwa mgbe mbido mbụ gasịrị dị ka oge siri ike: ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma ga-ezukọta na saịtị ahụ ma nọrọ ebe ahụ ruo abalị, na-ekpe ekpere, na-abụ abụ na okwu. Ụmụaka a na ndị nọ n'afọ iri na ụma abụrụ ezigbo enyemaka; ha na-anabata ndị njem ala, na-enyere aka n'akwụkwọ, na, dị nnọọ mkpa, na-enye nkwado maka onye ọhụụ nke nọgidere na ya na saịtị na Nna Atanazii. Ndị òtù nke Ezinụlọ Ezinụlọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhazi nzukọ ntorobịa kwa afọ nke na-eme ka Dzhublyk bụrụ onye a ma ama, kwụsie ike, na ido aha ziri ezi.
Ma, ọtụtụ ndị na-akwado na-ekwu na enweghị enyemaka ndị pilgrim na ndị na-eme njem sitere na L'viv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, na obodo ndị ọzọ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ukraine site n'azụ ugwu Carpathian Dzhublyk agaraghị anwụ. Ugbua n'ime izu ole na ole mgbe ọ pụtara, ụgbọ ala jupụtara na ndị pilgrim si n'akụkụ nke ọzọ nke Ugwu Carpathian pụtara na Dzhuledk, ha ka bụkwa ndị na-eso ụzọ kachasị asọpụrụ taa.
Ihe kacha mkpa banyere mmepe nke Dzhublyk dịka njem njem site na ya bụ ngwangwa na-aga n'ihu n'ihu dị ka ebe njem: na usoro nke ndị njem ala nsọ nakwa dịka ụlọ na ndị ọzọ devotional ụlọ na saịtị ahụ. N'oge ahụ, Dzhublyk bụ nnukwu mgbakọ nke ụlọ ụka, obe, ihe oyiyi na ụlọ ọrụ bara uru. [Foto na nri] Ọzọkwa, a na-ewu ụlọ ndị metụtara saịtị a n'èzí na nso nso. Ihe kachasị emetụ n'ahụ nke a bụ ebe obibi 300 kilomita nke okporo ụzọ Cross nke jikọtara Dzhublyk na L'viv na Ukraine nke Galicia.
A na-eji ụlọ dị iche iche eme ihe n'ọtụtụ ụzọ iji kwadoo arụmụka ma na-akwado ma na-ama aka na saịtị ahụ. Maka ndị kwadoro ihe kachasị mkpa, ọrụ ụlọ na Dzhublyk na-enye ihe akaebe kachasị agbagha nke eziokwu nke ọdịdị ahụ. O doro anya, ndị na-akwado na-ekwu na a na-etinye onyinye niile n'ọrụ mgbidi ma hụ ọganihu nkịtị nke Dzhublyk dịka ihe akaebe nke eziokwu nke ọdịdị ahụ: n'okpuru ọnọdụ akụ na ụba siri ike dị dị na Ukraine, onye ga-enwe ike iwuli ngwa ngwa ma nke ọma ma ọ bụrụ na Chineke enweghị enyemaka na ndị ozi ya? Maka ndị iro nke saịtị ahụ, ọrụ ihe owuwu bụ ịnwa ịchọta ọnọdụ n'etiti ebe ndị njem njem ndị ọzọ dị mkpa maka Transcarpathians. Ọzọkwa, ọbụna maka ndị ahụ ndị kwere na eziokwu nke ọdịdị ahụ, ọganihu ahụ na-ewu ihe [Image na nri] na Dzhublyk nwere ike ịhụ dị ka ihe na-enweghị isi. O doro anya na ndị ọhụụ kọrọ na Virgin Mary rịọrọ ka e wuo otu obere ụlọ osisi na Dzhublyk. Ihe ndị a na-ewu ugbu a na-arụ ụka n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, ụlọ chọọchị ahụ ewetala ebe ahụ, ndị bishọp nọ n'ógbè ahụ enyeghị ikike, ma ọ bụ na ha enweghị ikikere ụlọ obibi site na nchịkwa obodo. Otú ọ dị, Dzhublyk bụ n'oge a na-arụ ọrụ njem, n'agbanyeghị na ndị bishọp n'ógbè ahụ adịghị akwado saịtị ahụ site na mmalite.
Dzhublyk apparitions adịghị akwalite ozizi ọ bụla ma ọ bụ nkwenkwe ọ bụla n'ụzọ yiri nke pụtara na Lourdes ma ọ bụ Amsterdam. Na ozi ya Virgin Mary katọrọ ndị isi chọọchị, dịka atụ na Heaven / Purgatory / Helụ nyere ndị ọhụụ na ụbọchị mbụ nke ọbịbịa, ebe purgatory jupụtara ndị nchụàjà na karịsịa ndị bishọp. N'ikpeazụ, Virgin Mary na-ekwu okwu banyere nsogbu ndị dị mkpa, dị ka oge nke ndị ọzọ na-esote liturgy, asụsụ nke ederede (nke Transcarpathia bụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ukwuu) ma ọ bụ iwu ụlọ ọrụ ọhụrụ. N'oge na-adịbeghị anya, ọ na-enye onye ọhụụ ndụmọdụ site na onye ọhụụ, na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ banyere ihe nzuzo ma na-ekwupụta na ọ bụ n'ekpere ka ha kpee ekpere na ntụgharị uche. Ọ bụ ezie na Chọọchị ahụ akwadoghị ọhụụ ahụ, n'oge ahụ ka saịtị ahụ jupụtara kpamkpam n'ime mmegharị ofufe nke Grik Greek Eparchy nke Mukachevo, na nleta isi nke ọchịchị a, bishọp Milan Šašik. [Image na nri]
Ọ bụ ezie na a gaghị ekpe ikpe ahụ dị ka nke bishọp dị n'ógbè ahụ si dị ka ọ dị ugbu a, Dzhublyk na-eguzosi ike n'ihe omume nke Katọlik nke dị n'ebe ndịda na mpaghara. Nye ọtụtụ ndị Dzhublyk, mkpebi nke ikere òkè n'ememe okpukpe na Dzhublyk kama karịa na nzuko omeiwu ha dị iche iche na-egosipụta mmasị maka ihe si n'ọnọdụ ha dị iche iche, iche echiche, na ụdị nke ofufe. Ihe dị iche na - emetụta ọbụna onye na - ekiri ihe na - ahụ anya: na chọọchị ụka dị n'akụkụ Dzhublyk, ndị inyom niile na - aga akwụkwọ na - eyi akwa ma ọ bụ uwe ma na - ekpuchi isi ha na uwe na - A na-abụ abụ ndị a na-agụ ma na-edu ndú n'etiti ndị nwoke, na-abụkarị ndị okenye. Ụda olu dị iche iche na-anọ otu izu n'izu, ma bụrụ mpaghara nke mpaghara ahụ. Na Dzhublyk, dịka iche, abụ ndị na-eto eto na-eduzi abụ ndị ahụ, ọtụtụ n'ime ụmụaka. Tupu oge ndị okenye, n'oge udo, na mgbe ngọzi ikpeazụ gasịrị, otu ọkpụkpọ na-abụ abụ nke nsụgharị Ukraine nke abụ na abụm Katọlik nke oge a, nke papa Atanazii dere, onye ndu nke saịtị ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-ejide guitar na keyboards, ọ bụ ezie na ngwá egwu dịka iwu na-ejighị ya na ọwụwa anyanwụ. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eyi uwe ogologo ọkpa, ụfọdụ n'ime ha adịghị ekpuchi isi ha, ebe ndị ọzọ na-eyi akwa ụcha ma ọ bụ nke na-acha odo odo.
Otu nzukọ ndị ntorobịa, Ụmụ nke Ezinụlọ Dị Nsọ, nwekwara ọrụ dị mkpa na mmepe nke Dzhublyk. Ndị na-eto eto bụ ndị na-ekere òkè na ihe omume mbụ dị na Dzhublyk dị ugbu a na mmalite nke afọ iri abụọ, ọtụtụ n'ime ha ahapụwokwa obodo ndị gbara ya gburugburu maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ. Ha ka na-alaghachi na Dzhuledk, ụmụ akwụkwọ na Uzhhorod fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ụka ọ bụla, ndị na-amụ akwụkwọ na L'viv ma ọ bụ obodo ndị ọzọ dị na Ukraine nwere ike ịga Dzhublyk ugboro ole na ole n'afọ. Ka o sina dị, ha na-emetụ aka n'ụzọ na-eme ka ha jikọọ site na ọ bụghị nanị otu ebe dị nsọ. Kwa izu, Nwanna Theodore, nwa okorobịa na-eto eto nke bụ onye nlekọta nke nzukọ ndị ntorobịa Dzhublyk, na-ezigara ndị òtù niile ozi ederede. Ozi ndị ahụ nwere nlegharị anya maka otu izu na otu akụkụ nke Akwụkwọ Nsọ nke a ga-agụ ma gosipụta. Mgbe ụfọdụ, ha na-ekpekọ ekpere ọnụ n'otu oge ahụ n'agbanyeghị nhapụ nke anụ ahụ ruo ọtụtụ narị kilomita.
Echiche nke ịtọlite ​​ụmụ nke Ezinụlọ Dị Nsọ dịka nzukọ na-eme ka ndị na-eto eto ghọta mgbe ha na ndị pilgrim na-abịa Dzhublyk si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ukraine, òtù ndị ntorobịa bụ akụkụ nke okpukpe okpukpe nke oge a n'ime Katọlik. Chọọchị. N'oge ahụ, ọ bụ nanị afọ ole na ole gara aga, na Transcarpathia n'onwe ya, chọọchị ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi nke arụ ọrụ n'ime Chọọchị. Okpukpe Katọlik nke a na-agbaso n'ókèala ndị parish dị obere ma ọ bụ na-adịghị adị. Nke a agbanweela n'afọ ndị na-adịbeghị anya, dịka bishọp dị ugbu a, bụ Milan Šašik, kwadoro òtù dị otú a. O yiri ka ọ dị nnọọ njikere maka ngwá ọrụ dị iche iche nke ozi ọma nke dị n'ime usoro nke Chọọchị Katọlik zuru ụwa ọnụ. Dzhublyk aghọwo ebe ebe ihe omume okpukpe na-emepụta ihe ọhụrụ site na echiche nke ndụ ndị parish na obodo Transcarpathian nwere ike ịkwado ma gbalịa. Ndị òtù nke Ezinụlọ Ezinụlọ ndị na-amụ ihe n'obodo ukwu ndị dị na Ukraine nwekwara nkà n'ịji ịntanetị dị ka akụ. Ha na ndị ọgbọ si mpaghara dị iche iche na-enwe mmasị na ndụ okpukpe ma wetara Dzhublyk ụzọ ọhụrụ nke omume okpukpe.
Site na mbido Dzhubyk bu, ma di kwa, ebe ndi mmadu na-etinye n 'uzo ofufe, ndi mmadu na-ekwuputa ya site na ndi ndu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ọchịchọ nke Virgin Mary na ebe ịchụàjà dị na Dzhublyk ụka dị gburugburu, nke megidere akwụkwọ iwu nke Eastern Catholic Church. O nyekwara ndị mmadụ iwu ikwughachi Credo ugboro iri dị ka ekpere n'oge opupu ihe ubi; nke a na-akatọkwa nke a site n'aka ụlọ ọrụ ndị ọchịchị Credo bụ nkenke ekwupụtaghị ekpere ma ọ bụ Nkwupụta nke Okwukwe. Ihe ndị ọzọ na-esite na ntinye aka gụnyere ịsa ahụ na-ebu obe n'obe isi ụka [Foto dị n'akụkụ aka nri] (nke ga-eje ije ugboro iri atọ na atọ mgbe ị na-ekpe ekpere rosary) ma ọ bụ ihe nrịgo nke na-eduga n'obe maka ịdị n'otu nke Ndị Kraịst niile ( nke a ga-arịgoro na ngwakọta ekpere dị iche iche na nhazi nke anụ ahụ kwesịrị ekwesị).
Ọ dị mkpa icheta na anyị na Ndị Mmụta Christian Christian nke dị n'okpuru Vatican na-emekọrịta ihe ebe a, ya mere enwere ike ịhụ ọtụtụ ọhụụ dịka ndị a na-ele anya site na mpaghara. Dzhublyk wetara na Transcarpatia ma ọ bụ mee ka ọtụtụ ofufe dị iche iche mara na Kristian Katọlik zuru ụwa ọnụ.
Onye isi na onye njikwa nke saịtị ahụ bụ nna Atanasii Tsiipesh, onye bụbu onye mọnk Basilian na onyeisi ụlọ obibi ndị mọnk na Boroniava, bụ onye hapụrụ iwu mbụ ya wee ghọọ onyeisi nke iwu ọhụrụ na Dzhublyk. Ọ na-enweta nkwado sitere n'aka otu òtù abụọ: Òtù Ụmụnna nke Ezinụlọ Dị Nsọ na Ụmụ nke Ezinụlọ Dị Nsọ. Na afọ na-adịbeghị anya, mgbe ihe dị ka afọ iri nke mkparịta ụka na esemokwu siri ike, saịtị ahụ jupụtara kpamkpam n'ime njem njem na ofufe nke Akachevo Greek Catholic Eparchy.
Uzo esi eme ka Grik Greek Eparchy nke Mukachevo lebara anya na Dzhublyk nwere ike iwere ya dika mmeghari n 'ugbua site n'igbu ikike nke nhazi iji gbochie mmekorita nke ndi mmadu iji gbalita iji iwu ndi mmadu mee ka ha nwee nzuko. Isi nke Muchevo Greek Catholic Eparchy na 2002, Bishop Ivan (Ioan) Semedii, kwusiri ike na ọdịdị na mmepe nke ebe obibi njem ọhụrụ. O nyere iwu na-amachibido iwu ụlọ ọ bụla na saịtị ahụ ma nyefee ndị ọrụ ala nsọ n'aka onye ụkọchukwu nke ụka dị na Vil'khivka, bụ onye na-etinyeghị aka na mmemme mbụ ahụ. Bishọp rịọkwara ndị isi nke iwu Basilian nke Nna Atanazii nyere aka na mkpochapụ ya na Dzhublyk. N'akwụkwọ ozi nke September 30, 2002, ndị Rom na-edozi na ndị Basilian, Dionisii Liakhovych, jụrụ papa Atanazii ka ha zere itinye aka na Dzhublyk n'ihi na "usoro okpukpe anyị, na nkwonkwo mmekọrịta dị ogologo oge ya, kwenyesiri ike na mmadụ apụghị tinye aka na ikpe nke 'ọhụụ ọrụ ebube' na-enweghị ịkpata nsogbu ndị na-enweghị isi. "Na October 29, 2002, Bishop Semedii nyere akwụkwọ ozi na-esonụ:
Na ndabere nke akwụkwọ ozi Septemba 30 site n'aka Protoarchimandrite OSBM Dionisii Liakhovyich yana mkparịta ụka ndị Apostolic Nuncio maka Ukraine, Achịbishọp Nikola Eterović, na L'viv na Ọktoba 2002, 25, ana m amachibido Fada Atanazii Tsyipesh OSBM, yana m ndị ụkọchukwu niile nke Mukachevo Greek Catholic Eparchy na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, ka ha duo emume nsọ ọ bụla, ikwusa ozi ọma, ịkpọ ndị mmadụ oku ka ha soro ha mee njem nsọ, na ọbụna karịa iji wuo ụlọ ụka, ụka, ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk ọ bụla n’ebe “ngosipụta dị ebube nke Nsọ Nwa agbọghọ na Vil'khivka n'akụkụ Dzhublyk. ” Iwu a anaghị emetụta ndị kwere ekwe. Ha, ọ bụrụ na ha achọọ, nwere ike ikpe ekpere “n'akụkụ Dzhublyk.” (Blahovysnik 11)
Mgbanwe nke iwu ochichi nke Dzhublyk mere mgbe ezumike nká nke Bishop Semedii na Jenụwarị 2003 na nhọpụta nke Bishop Milan Sašik dị ka isi nke ndị ọchịchị. Bishop Sašik guzobere ọrụ nke ga-eme nchọpụta banyere ihe ndị ahụ na-apụta ma mee ka ndị ụkọchukwu na-eleta saịtị ahụ. Ndị ọrụ ahụ nyochaa ahụike uche nke ndị ọhụụ ma na-agakarị Dzhublyk, karịsịa n'afọ ndị mbụ. Ka oge na-aga, nleta ndị ahụ na-abụkarị ihe na-emekarị ma mee naanị mgbe ụfọdụ ihe dị mkpa dị mkpa banyere ọrụ ebube mere.
Na May 27, 2003 Bishop Milan Sašik, bụ onye okenye ahụ bụ Bishop Ivan Marhitych, kwadoro n'oge ahụ, chọrọ ka Nna Atanaziyi wepụ na Dzhublyk wee kweta ịkwado ọrụ nke ebe ndị mọnk. Nna Atanaziǐ kwesiri isonye n'usoro iwu ahu ma nọrọ n'ulo ocha ha na Kolodiivka (ogbaju Transcarpatia), ma odikariri oge. Maka ndị na-akwado Dzhubkyk, ma site na Irshava Deanery na site n'ebe dị anya, mbubreyo May 2003 bụ oge agha zuru oke na Dzhublyk. Mgbe ụbọchị a gasịrị, Nna Atanaziǐ ghọrọ onye na-akwado ndụ Dzhublyk n'anya ndị na-eso ụzọ Dzhublyk kachasị njọ. Ahụmahụ nke ịgbachitere Dzhublyk nyere ndị mmadụ mmetụta pụrụ iche nke inwe mmetụta mmetụta uche n'etiti onwe ha na mmetụta nke inwe ike iji chebe ebe ahụ.
Mgbe ihe merenụ nke May 2003, saịtị ahụ, ọ bụ ezie na ọ ka na-arụrịta ụka nke ukwuu, jiri nwayọọ nwayọọ malite inweta ezi omume, usoro nke nyeere aka na Bishop Sašik na saịtị ahụ. Na July 2004, o nyere ikike ikikere nke ya iji guzobe usoro mgbakọ ndị mọnk na Dzhublyk nke ndị mọnk na ndị nọn nwere ike ịnakwere. Nna Atanazii, na-agbaso, dị ka ọ na-ekwu, ndụmọdụ nke Virgin Mary, hapụrụ iwu ndị Basilian ma ghọọ isi nke ọchịchị ndị mọnk ọhụrụ e guzobere na Dzhublyk. Bishop Sašik malitere ịga na saịtị ahụ mgbe nile n'oge oge okpukpe dị mkpa (Ista, Krismas, ụbọchị ncheta ọhụụ), na-eduzi ebe a na-ahụ maka ihe ndị metụtara okpukpe ma na-agọzi ụlọ okpukpe ndị e wuru ọhụrụ. Nke a apụtaghị na bishọp na-anakwere ihe ọ bụla na-eme na Dzhublyk, ọbụnakwa na-erughị ya ka o wee kwenye na ọ bụ eziokwu. N'ụzọ megidere nke ahụ, n'isi ụlọ ọrụ ndị isi obodo, oké olu megide Dzhublyk na-emetụta ndị nkwado. N'agbanyeghị nke ahụ, a maara na Dzhublyk nwere nkwado siri ike na mpaghara ma tinye ya n'ime nkwado netwọk dị mgbagwoju anya nke na-agafe ókèala ọchịchị. Ọzọkwa, ndị isi ụka ghọtara eziokwu ahụ bụ na Dzhublyk aghọwo ebe ọtụtụ ndị kwere ekwe kwere ekwe na-eme ka okwukwe ha sikwuo ike na itinye aka na Chọọchị Katọlik.
Dzhublyk siri ike na mkparịta ụka ogologo oge banyere ebe Transcarpathia nọ na Ukraine na ndị na-asụ Slavic. Akụkụ a nke Ukraine nwere akụkọ ka ukwuu n'akụkọ ihe mere eme banyere ịchịisi ọchịchị karịa akụkụ ndị ọzọ nke Western Ukraine. Na nkenke, ruo mgbe ngwụsị Agha Ụwa nke Abụọ, usoro nchịkwa nke mba Ukraine nwere ike ime ebe ahụ ruo nanị oke oke. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị na-asụ Slavic kwuru na ha bụ Rusyns ma ọ bụ dịka mpaghara, na-enweghị njikọ miri emi n'ebe obodo ọ bụla ka ukwuu. Otú ọ dị, n'oge ndị Soviet, karịsịa banyere ndị Katọlik Katọlik Grik, bụ ndị a machibidoro chọọchị ya iwu, a na-ewusi ike nke Ukraine. Ndị ụkọchukwu ndị na-arụ ọrụ iwu na-akwadoghị, site na ọrụ rụrụ arụ, na-ejikọta ya na ndị isi chọọchị Katọlik nke Gris nke Ukrainian Greek Catholic Church site na saịtị ọzọ nke Carpathian Mountains ma ọ bụ na ndị bishọp ndị a jikọtara, nakwa n'oge ahụ delegalized, Mukachevo Ndị Katọlik Katọlik Grik.
Mgbe ọdịda nke Soviet Union, ntọala nke Ukraine onwe ya na nyochaghachi nke Chọọchị Katọlik Grik, e nwere arụmụka ụka dị egwu gbasara àgwà Transcarpathia na ọnọdụ nke Akachukwu Greek Catholic Eparchy. Ụfọdụ chọrọ ka ya na Ukrainian Greek Catholic Church, nke nwere ọdụ na L'viv na emesịa Kyiv; ndị ọzọ chọrọ ịhapụ ọnọdụ ya. Nhọrọ ikpeazụ a meriri na Vatican na 1991, na n'oge a na Muchevo Greek Catholic Eparchy nwere sui Iuris ọnọdụ ma na-edozi ya ozugbo na Vatican.
Ebe a na-ahụ anya na Dzhublyk na-esonye na arụrịta ụka ndị a, dịka ụda maka ndị ahụ, bụ ndị ga-achọ ka ha dịrị n'otu na ọgbaghara Muchevo na Chọọchị Katọlik Greek. Ọ bụ saịtị nke nkwupụta nke mba mba Ukraine na saịtị nke Ukrainian patriotic agụmakwụkwọ. A na-eme ememe ndị a na Dzhublyk nanị na Ukraine, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ndi nlekota oru ha na-eduzi ha na Slavonic Church. Nke a bụ ọchịchọ doro anya nke Virgin Mary, nke Olenka gwara ya. Otu n'ime ndị ụkọchukwu bụ ndị na-eduzi akwụkwọ ebubo n'ebe ahụ n'oge ụbọchị mbụ mgbe ọ nwụsịrị gwara m na a kwụsịrị ya mgbe ọ na-eji Slavonic Church ma nye iwu ka ọ banye na Ukraine. The saịtị na-eme usoro ya dị ka Kyiv oge, nke bụ oge ọrụ na Transcarpathia; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị bi n'ógbè ahụ na ọtụtụ ndị ngwuro no n'agbata na-ebi ndụ n'oge Central Europe.
Ọzọkwa, Virgin Mary abụghị nanị ọnụ ọgụgụ ga-abịakwute ndị ọhụụ. N'ime oge, n'eziokwu, a bịara mara saịtị ahụ dị ka ebe ngosi nke Ezinụlọ Nsọ na ihe ndị ọzọ dị nsọ. Ọ bụ ezie na Nwaanyị Mary ka nọgidere na-elekwasị anya na ntinye maka ndị pilgrim, ọnụọgụgụ ọnụ ọgụgụ ndị dị nsọ iji kwuo okwu site na ndị ọhụụ ahụ doro anya na gbasaa oge. N'ime akwụkwọ nta a na-ere na saịtị ahụ, dịka ọmụmaatụ, anyị na-achọta ebe a na-ekwu maka mmalite nke St. Andrew nke mekwara n'oge na-adịghị anya mgbe ihe mbụ mere:
N'echi bụ Ememme Ndị Ntorobịa Nile nke Mba Ukraine. Mgbe ụtụtụ nke ụtụtụ gasịrị, o [Olenka] kwuru na ọ hụrụ, n'akụkụ Nne nke Chineke na abụọ n'ime ndị isi ndịozi (Pita na Paul), otu onye ọ na-ahụtụbeghị mbụ. Mama nke Chineke gwara ya na nke a bụ onyeozi Andrew. Nke a ọ ghaghị ịdị ịrịba ama maka ala anyị dị na Ukraine na ọ hụrụ Andrew onyeozi n'ụbọchị ahụ? Anyị maara site na akụkọ ifo ndị dị ndụ n'etiti ndị anyị na nke a bụ Andrew Protokletos, onye jere ije n'elu ala Ukraine ma gọzie ugwu nke e mesịrị wu Kyiv. N'eziokwu, anyị kwenyesiri ike ugboro ugboro, na Ezinụlọ Ezinụlọ abịaghị maka mpaghara pụrụ iche nke Ukraine, kama maka mba ahụ nile, maka ọha mmadụ nile na Ukraine. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na mmeghari nke ndị a na-akpọ Rusyns ma ọ bụ ndị ọzọ Transcarpathian na-ebubo Dzhublyk nke mba mba Ukraine. Ijere Chineke na mba ozi enweghị ihe ọ bụla jikọrọ aka na nke a (Tsyipesh 2002-2003: 85-86).
Dzhublyk na-ejikọta n'akụkụ nke ọzọ nke Ugwu Carpathian n'ụzọ ọzọ pụrụ iche ma dị egwu. Ogologo nke 300-kilometer nke okporo ụzọ Cross na-agafe Osimiri Carpathian jikọtara Dzhublyk na L'viv. Ọ bụ obere ìgwè nke ndị si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ukraine malitere iwu Ụlọ nke Cross. Ebumnuche ahụ bụ ijikọta elu Castle hill na L'viv, ebe Virgin Mary pụtara na 1787, na Dzhublyk. E wuru Ụlọ Nzukọ ahụ na 2003, malite na High Castle dị na L'viv ma na-aga n'ihu n'okporo ụzọ okporo ụzọ L'viv-Mukachevo-Dzhublyk, dịka ihe dị mkpa dị mkpa nke dị n'otu ụlọ chọọchị Katọlik abụọ dị na Ukraine na dịka ngwá ọrụ dị ike maka mgbanwe ndi mmadu kwesiri ime ka ha na-eje ije ma obu, karia mgbe, na-ebughari ebe obibi nke Cross.
Ndị mọnk na-etinyere saịtị ahụ, yana ndị metụtara ya, na-arụsi ọrụ ike na mmemme ndị Ukraine ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, ihe ncheta mbụ na Transcarpathia na Squad Elu (Nebesna Sotnia), ndị mmadụ gburu n'oge ọgba aghara Maidan nke 2013 na 2014, guzobere na Dzhublyk na November 21, 2014. Ọ dị mkpa iburu n'uche, na a na-eme ụbọchị a dị ka ofbọchị Ebube na Nnwere Onwe nke Ukraine, guzobere iji kaa Ukraine abụọ mgbanwe, Orange Revolution nke 2004 na 2005, na mgbanwe nke ugwu, dị ka ihe ndị mere n’afọ 2013-1014 mara na Ukraine.
Ndị mọnk si Dzhublyk nọkwa na-ekere òkè na ihe omume na Maidan. Nna Atanazii weere na Maidan a ebere nke ebere, nke a kwenyere na ọ pụtara n'ụzọ ọrụ ebube na iko agbaji na Dzhublyk na 2008. O weere ya oyiyi a na Kyiv na Disemba 2013, bụ ebe o jiri ya gọzie ndị zukọtara. Ebe ọ bụ na esemokwu dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Ukraine, Nna Atanazii na ndị mọnk ndị ọzọ na-aga ebe a na-alụ ọgụ iji nweta nri na ihe ndị ọzọ nye ndị agha Ukraine, ma karịsịa ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ.
Otú ọ dị, nke kachasị mkpa, Dzhublyk aghọwo ebe ịkụzi mba n'anya maka onye ntorobịa nke Transcarpathia. Ọganihu na-eto eto nke Congress (Z'izd) nke Ndị Ntorobịa Ndị Kraịst (haziri na Dzhublyk n'August ọ bụla mgbe ọ malitere mmalite) gosipụtara na ụzọ ọrụ na ndị na-eto eto nke ndị nlekọta nke saịtị ahụ na-enwe ọganihu. E nwere asọmpi egwuregwu, egwuregwu, na ihe ngosi vidio na mgbakwunye na omume ime mmụọ, akwụkwọ, na ekpere. Nzuko a malitere na August 24, Ụbọchị Independence Ukrainị, ma kwusi na August 27, ụbọchị ncheta nke mbido mbụ na Dzhublyk. Ihe omume kachasị mkpa nke ndị nnọchiteanya ahụ bụ njem ndị njem na Krasne Pole, ebe e meriri ndị agha Carpatho Ukraine na 1939. Na weebụsaịtị Dzhublyk, Nna Theodore, otu n'ime ndị mọnk nke iwu ndị mọnk ọhụrụ nke ndị mọnk na Dzhublyk, na-akọwa na ọ dị mkpa icheta ndị a na-adịghị echetara dị ka ndị agha nke Ukraine. Ọ na-akọkwara otu n'ime njem ya na Krasne Pole n'ụbọchị ahụ na ndị òtù ụmụaka nke ụmụaka Family Family Family Family. Nwanna Theodore kọwara na Transcarpathia abughi ala ọmịiko nke ukwuu, karịsịa ma e jiri ya tụnyere mpaghara L'viv ma ọ bụ Ivano-Frankivsk. Ọzọkwa, maka ya, ọ bụ ihe ijuanya na oge na-akpali akpali mgbe ọ gwara ndị na-eto eto na bọs ka ha na-abụ abụ olu ọma ma ọ bụ abụ okpukpe. Ụmụaka họọrọ ịkwọ abụ National Ukraine, na aka ha na obi ha. Nwanna Theodore sooro abụ ahụ site n'ikwu, "Otuto nye Ukraine!" Ụmụ ahụ wee sị, "Ebube nye ndị dike!" Nye ya, nke a bụ oge na-akpali akpali. Ka ha si na Krasne Pole gaa Dzhublyk, ha abanyekwa na abụ ndị gosiri "ọmịiko, mmụọ nke ụmụ Transcarpathian anyị." Ebe ọ bụ na 2014, nwata ahụ na-ekpe ekpere maka ndị agha na ndị ọrụ afọ ofufo Ukraine bụ ndị nwụrụ n'ebe ọwụwa anyanwụ Ukraine na ndị nwụrụ na Kyiv n'oge mgbanwe nke ebube. Na 2015, a gọziri ọkọlọtọ Ukraine n'oge ememme pụrụ iche maka nkwadebe maka ịnyefe ya n'aka ndị agha Ukraine na akara ihu na Eastern Ukraine.
Image #1: Foto nke mmiri na Dzhublyk bụ ebe mmalite nke Virgin Mary malitere. E nyere ya ikike site na Agnieszka Halmba.
Image #2: Foto e debere n'ihu Ụlọ Akwụkwọ Ezinụlọ dị na Dzhublyk.Nyere ya ikike site na Agnieszka Halmba.
Foto #3: Foto nke ihe atụ nke Ụlọ Nsọ Ezinụlọ dị nsọ na Dzhublyk. E nyere ya ikike site na Agnieszka Halmba.
Image #4: Foto nke liturgy na-edu site na bishop Milan Sasik na Dzhublyk na 2017. Foto si https://www.facebook.com/Jublyk/photos/pcb.1844570915834877/1844570792501556/?type=3&theater.
Foto #5: Foto nke n'ihu Ụlọ Nzukọ Ezinụlọ Dị Nsọ na Dzhublyk .. E nyere ya ikike site na Agnieszka Halmba.
** Ọ gwụla ma a sị na edeghị ya ọzọ, ihe dị na profaịlụ a na-esite n'aka Halemba, Agnieszka. 2015. Mkparịta ụka Marian Apparitions. Ọchịchị nke Okpukpe na Transcarpathian Ukraine. Budapest na New York: CEU Pịa.
Tsyipesh, Atanazii. 2002-2003. Istoriia Poiavy Presviatoyin Rodyny U Dzhublyku Na Zakarpatti, (Dzhublyk) ..
NKWUKWỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ
Halemba, Agnieszka “Mmegharị Nkwupụta dị ka saịtị nke Nnwale Okpukpe. Ihe Omume nke Transcarpathian Ukraine ” Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies, Vol. 21 Nke 2,, p. 43-58
Halemba, Agnieszka. 2016. "Virgin Virgin, State na Nation na Transcarpathian Ukraine" Pp. 201-29 na Marian Devotions, Mobilization Political na Nationalism na Europe na America, nke Roberto Di Stefano na Francisco Javier Ramón Solans dere. London: Palgrave MacMillan.
"Svyashchenyk iz Zakarpattya pryviz na Maidan Herukotrornyi Obraz Bozhogo Myloserdya." 2013. Religiino-informaciina sluzhba Ukrainy, December 14. Nweta site na http://risu.org.ua/ na 15 March 2018.
Tsyipesh, Atanasii. 2010. Istoriia Poiavy Presviatoyin Rodyny U Dzhublyk Na Zakarpatti. Dzhublyk.
"U Dzhublyku na Irshavshchyni vstanovyli pershyi na Yakarpatti pam'yatnyk Nebesnii sotni." 2014. Zakarpattya online, November 22. Nweta site na http://zakarpattya.net.ua/ na 15 March 2018.
"Velykodnii koshyk z Dzhulbtka na zonu ATO." 2016. Katolyckii Oglyadach, May 7. Nweta site na http://catholicnews.org.ua/ na 15 March 2018.
"XIII Vseukrainskiyi forum khrystyyanskoi molodi v Dzhublyku." 2015. Katolyckii Oglyadach, September 1. Nweta site na http://catholicnews.org.ua/ na 15 March 2018.